भूकम्पपीडितको टहरोमा आगलागी, २ को मृत्यु, एक घाइते « Lokpath
२०७५, ९ कार्तिक शुक्रवार ०५:४०
भूकम्पपीडितको टहरोमा आगलागी, २ को मृत्यु, एक घाइते
प्रकाशित मिति : २०७५, ९ कार्तिक शुक्रवार ०५:४०
जिरी । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा भूकम्पपीडितको टहरोमा आगलागी हुँदा एकै परिवारका दुईको मृत्यु भएको छ भने एक घाइते भएका छन् ।
जिल्लाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ स्थित टासिनाममा गोपाल शेर्पाको टहरोमा आगलागी हुँदा शेर्पाकी आमा र छोराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । आगलागीमा परी शेर्पाकी आमा ८० वर्षीया डालकी शेर्पा र छोरा १२ वर्षीय मिङमा शेर्पाको मृत्यु भएको दोलखाका प्रहरी प्रमुख वासुदेव पाठकले जानकारी दिए ।
आगलागीका कारण उनको जेठो छोरा १५ वर्षीय फुर्साङ शेर्पा घाइते भएका छन् । घाइते फुर्साङको उपचारका लागि सदरमुकाम चरिकोटतर्फ ल्याउँदै गरेको दोलखा प्रहरीले जनाएको छ ।
करीब बिहान २ बजे लागेको आगो साँढे ४ मा प्रहरी र स्थानीयको पहलमा नियन्त्रणमा आएको थियो । वृद्धा डालकी अँगेना नजिकै सुत्ने गरेकाले उनले ओढेको कपडामा सल्किएर आगलागी भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । परिवारमा सात सदस्य रहे पनि तीन जना मात्रै घरमा रहेको र अन्य सदस्य भने घरभन्दा आधा घण्टा टाढा गोठमा बस्दै आएकाले उनीहरु भने बाँच्न सफल भएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्‍यो लोडसेडिङ तालिका
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार प्राधिकरणको
बार्सिलोनाको करियरमै मेस्सीलाई पहिलो रातो कार्ड !
काठमाडौं । एथ्लेटिक बिल्बाओले स्पेनिस सुपर कप फुटबलको उपाधि चुमेको छ । आइतवार
झलनाथ खनाल/ कैलाली । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ एकतानगर शिविरका बलबहादुर टमट्टा रोजगारीका लागि
के नेकपा मिल्ने सम्भावना बाँकी छ ? घुमाउरो तरीकाले बाहिरीएका पाँच ‘क्लू’ यस्ता छन्
काठमाडौं- पार्टी एकता (२०७५ साल जेठ ३ गते) को मसी सुक्न नपाउँदै आन्तरीक
अटो रिक्सा चालक : कोही स्वदेशमै भविष्य खोज्दै, कोही विदेशिने…
के नेकपा मिल्ने सम्भावना बाँकी छ ? घुमाउरो तरीकाले बाहिरीएका…
युभेन्टसको उपाधि यात्रामा धक्का, इन्टर मिलानसँग पराजित